Abadlali bebhola laseScotland
Abadlali bebhola lase-Algeria
Abadlali bebhola baseMelika
Abadlali bebhola le-Oceania
Abadlali bebhola laseTurkey
Abadlali bebhola bakudala
ZonkeAbadlali bebhola lebhola lesiNgisiAbadlali bebhola laseScotlandAbadlali bebhola laseWales
Ama-Emile Smith Rowe Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-Rhys Williams Childhood Indaba I-Untold Biography Amaqiniso
UJohn McGinn Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso
Jarrod Bowen Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso
AmaRafael Leao Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Ama-Angelino Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-Alassane Plea Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-Houssem Aouar Childhood Indaba I-Untold Biography Amaqiniso
ZonkeAbadlali bebhola lase-AlgeriaAbadlali bebhola laseCamerooniaAbadlali bebhola le-GhanianAbadlali bebhola lase-Ivory CoastAbadlali bebhola laseNigeriaAbadlali bebhola laseSenegal
I-Angelo Ogbonna Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-Folarin Balogun Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Ama-Youssoufa Moukoko Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-Arthur Masuaku Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
ZonkeAbadlali bebhola lase-ArgentinaAbadlali bebhola laseBrazilAbadlali bebhola lezinyawo baseCanadaAbadlali bebhola laseColumbianAbadlali bebhola baseMelikaAbadlali bebhola lase-Uruguay
URonald Araujo Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts
Ama-Raphinha Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
IZINDABA ZAMABHOLA AMERICAN
Ama-Moises Caicedo Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
I-Leon Bailey Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
ZonkeAbadlali bebhola le-OceaniaAbadlali bebhola laseTurkey
I-Hakan Calhanoglu Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-Cengiz Under Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
IZINDABA ZASE-ASIA-OCEANIAN FOOTBALL
ZonkeAbadlali bebhola bakudalaAbadlali bebholaAbaphathi bebhola
URalph Hasenhuttl Ingane Yendaba Yobuntwana ne-Untold Biography Amaqiniso
Ama-Hansi-Dieter Flick Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Ama-Marcelo Bielsa Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Ikhaya IZINDABA ZAMABHOLA AMERICAN Abadlali bebhola laseColumbian Amaqiniso weDuvan Zapata Ingane Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-Biography yethu kaDuvan Zapata ikutshela amaqiniso ngendaba yakhe yobuntwana, impilo yasekuqaleni, abazali, umndeni, unkosikazi, izingane, indlela yokuphila, ukubaluleka kweNet kanye nempilo yomuntu siqu.
Kafushane nje, le yindaba yohambo lomdlali webhola leDuván Esteban Zapata, kusukela ezinsukwini zakhe zobuntwana, kuze kube yilapho ephumelela. Ukuze uvuselele isifiso sakho sokuphila, nangu ubuntwana bakhe kugalari yabantu abadala - isifinyezo esiphelele seBio kaDuvan Zapata.
Impilo nokuvuka kukaDuvan Zapata.
Yebo, wonke umuntu uyazi uZapata ngejubane lakhe, ngokomzimba nangeso lakhe elikhulu lokushaya amagoli. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka inguqulo yethu yeDuvan Zapata's Biography ethakazelisa impela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
UDuvan Zapata Wezingane Indaba- Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Kwabaqalayo be-Biography, ubizwa ngegama lesidlaliso "I-Big Panther". UDuván Esteban Zapata Banguero wazalwa ngosuku lwe-1 ngo-Ephreli 1991 emtholampilo waseRafael Uribe Uribe eCali, eColombia.
Umdlali webhola laseColombia ungowesibili ezinganeni ezimbili ezizalwa ngumama wakhe, uLate Elfa Cely Banguero noyise, uLuis Oliver Zapata. Ngezansi isithombe esingajwayelekile sabazali abathandekayo bakaDuvan Zapata.
Hlangana nabazali bakaDuvan Zapata- unina, uLate Elfa Cely Banguero nobaba wakhe, uLuis Oliver Zapata.
Isendlalelo Somndeni KaDuvan Zapata: Ubuwazi ukuthi umlumbi webhola lezinyawo ungowesizwe saseColombia sobuzwe obuhlanganisiwe nemvelaphi yomndeni wase-Afro-American? Eqinisweni, abazali bakaDuvan Zapata bamkhulisa endaweni yaseCórdoba esifundeni sase-Aguablanca, eCali lapho akhulela khona kanye nodadewabo omdala uCindy Carolina.
Isithombe esihle seDuvan Zapata Childhood- Wakhulela eCordoba eCali.
Ukuphila Kwasekuqaleni kukaDuvan Zapata: Ukukhula eCórdoba, uDuvan osemusha waqala ukudlala ibhola emigwaqweni emincane yabahamba ngezinyawo eCali lapho kwakuyindlu yakhe. Ngenkathi insizwa eyayikhona ngaleso sikhathi, yayiphupha ngokuba ngumdlali webhola odumile, hhayi udumo noma ingcebo emangalisayo kodwa ukuze ikwazi ukuthenga i-PlayStation!
UDuvan Zapata Wezingane Indaba- I-Education ne-Career Buildup
Ngesikhathi uDuván eneminyaka eyi-11, ithalente lakhe lebhola lase selivele lacaca kubazali bakhe ababona kufanelekile ukuthi isikole sakhe esijwayelekile eLiceo Superior del Valle eCiudad Córdoba kufanele sihambisane nomsebenzi owakha amakhono ebholeni.
Ngo-11, uDuvan wayesenomzimba wokugijima futhi wayekulungele ukuqala umsebenzi wakhe ekwakheni ibhola.
Ngakho-ke, uDuván owenza ibanga lesi-6 ngemuva kokufuna imvume yabazali bakhe wavunyelwa ukubhalisela emazingeni wobuntwana bekilabhu yasekhaya i-América de Cali ngonyaka ka-2002. Ngenkathi ekilabhu yasendaweni, uDuvan wakhula ngokuqina, ngobungcweti nangokuphakama kangangokuba wayesele umi mude ku-1.86m lapho eneminyaka engu-16 ngonyaka we-2007.
UDuvan Zapata Wezingane Indaba- Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Kwakuse-América de Cali lapho uDuvan akhuphuka khona, waphenduka ubungcweti waze washaya igoli ku-pro debut wakhe kumjabulisa umqeqeshi wakhe - u-Diego Umaña - owayemnikeze ithuba lokuziqeqesha neqembu eliphezulu leqembu. UDuván wadlalela i-América de Cali amasizini amabili ngaphezulu (2009/2010 & 2010/2011) ngaphambi kokuthi abolekiswe ohlangothini lwase-Argentina - i-Estudiantes lapho naye athola khona amagoli ekuqaleni kwakhe.
Ukudlondlobala kwezibalo: Ungambona eneqembu elibekelayo le-América de Cali?
I-prodigy yebhola iqhubeke nokuqopha ukwanda okukhulu kwamagoli yize kwesinye isikhathi ibivela neqembu eligcina iqembu. Ngaleyo ndlela, ama-Estudiantes athenga isigamu samalungelo akhe okudlala e-América de Cali ngaphambi nje kokuba aqale ukuheha izintshisekelo ezivela kumakilabhu aseYurophu ahamba phambili kubandakanya neWest Ham eyayiseduze ukumsayinisa kodwa yanikela ngoba ayengayitholi imvume yokusebenza kuye. Injabulo yomndeni kaDuvan Zapata yayingazi mingcele ngaleso sikhathi iklabhu yase-Italy, uNapoli wamsiza ukuthi avikele i-visa yase-Italiya ezobadlalela.
UDuvan Zapata Biography- Umgwaqo oDumela Igama
UDuvan ogcine ethengwe yi-Italian Side Napoli, akazange alithole ithuba elifanele lokuzibonakalisa yize wayengomunye wabasayinisi ababiza kakhulu eqenjini ngaleso sikhathi. Eqinisweni, umqeqeshi kaNapoli ngaleso sikhathi URafa Benitez wayevame ukuphawula ukuthi uDuvan ubalulekile ekilabhini kepha ukungabi nesikhathi sokudlala somgadli kufakazele lokho.
UNapoli kulapho aqala khona ukuzwa ukukhungatheka edlala ibhola lezindiza ezihamba phambili.
Ngakho-ke, akumangazanga lokho Naples ubolekise uDuvan ku-Udinese lapho ahlupheke khona yifomu engazinzile ngenxa yokulimala. Naye uDuvan akazange amangalise ngemalimboleko eSampdoria lapho ayesesekude kakhulu nokufeza amandla akhe. Eqinisweni, uDuvan uthole ucingo eqenjini lokuqala laseColombia leNdebe Yomhlaba ka-2018 kodwa akazange enze ukusika ohlwini lokugcina ngezizathu ezisobala.
UDuvan Zapata Biography- Ukuphakama Kumlando Wendaba
Njengesiphukuphuku esivela emlotheni waso, uDuvan waqala ukubonisa amandla akhe aphelele lapho Atlanta, iklabhu athengiselwe lona uSampdoria ngemuva kokuba uhlangothi lwase-Italy lunqume ukuthi alusadingeki.
Ngamagoli ngemuva kwamagoli, uDuvan wazimisa njengomgadli ovelele weSerie A yeligi ngokuhlanganyela nayo Cristiano Ronaldo esikhathini sakhe sokuqala! Ubuye wasiza u-Atalanta ukuthi afike ku-Cop2019 Italia Final ka-XNUMX futhi athole isicoco sendawo yesithathu eSerie A. Abanye, njengoba besho, umlando.
Bona ukuthi ngubani owabelane ngomklomelo noChristiano Ronaldo.
UDuvan Zapata Umfazi nezingane
Ukuqhubekela phambili empilweni yomndeni kaDuvan Zapata, ushade nentombi yakhe waphenduka unkosikazi - uNana Montaño futhi kunezinto eziningi ezinhle amenzela zona empilweni yakhe yomshado. Lezi zithandani zahlangana emuva kakhulu e-2012 eCali ngenkathi uDuvan edlalela iqembu lase-Argentina i-Estudiantes. UNana wayengumfundi wasenyuvesi owenza izifundo zePsychology ngaleso sikhathi. Bathandana iminyaka embalwa ngemuva kwalokho bathatha ubudlelwane babo baba sezingeni elilandelayo ngokushada ngemuva kweminyaka.
Hlangana Nonkosikazi KaDuvan Zapata. Babukeka bephelele komunye nomunye, akunjalo?
UNana wayengowesifazane owayazi kahle ukuthi angagcina kanjani indoda yakhe! Kanjalo, awekho amarekhodi wokuthi uDuvan wayenezinye izintombi phakathi naleso sikhathi lapho ayethandana khona nowesifazane owayezoba ngumkakhe. Lezi zithandani zingabazali bezingane ezimbili ezithandekayo ngesikhathi sokubhala le bio. Bahlanganisa uDantzel (indodakazi) noDayton (indodana).
Isithombe sikaDuvan Zapata nomkakhe nezingane zakhe iDantzel & Dayton.
UDuvan Zapata Amaqiniso omndeni nokuphila
Ngubani uDuvan Zapata ngaphandle komndeni futhi ubezoba yini ukube umzali wakhe kanye nengane yakubo bebengekho ngenxa yakhe kwasekuqaleni? Sikulethela amaqiniso ngamalungu omndeni kaDuvan Zapata aqala ngabazali bakhe.
Mayelana nobaba kaDuvan Zapata: U-Luis Oliver Zapata unguyise wobungcweti bebhola. Wazalelwa eCorinth, eColumbia futhi wakhulela eTetillo. Yebo, uZapata wayengubaba onothando futhi ongisekelayo, wamkhulisa ngokuqinile uDuvan ukuba abe ingane elalelayo nenenhlonipho futhi waqinisekisa ukuthi ulinganisa izifundiswa zakhe ngokudlala ibhola. Yini enye? U-Luis akakaze aphuthelwe ukuthatha uDuvan ukuyoqeqeshwa ngesikhathi sakheka umsebenzi. Manje uLuis ubamba iqhaza elikhulu ekunikezeni indodana yakhe okuwukuphela kwayo isidingo sokugxila nokuhlala uthobekile.
Isithombe esingajwayelekile sikaLuis ejabulela iholide elibizayo ngezilokotho zempumelelo yendodana yakhe.
Mayelana nomama kaDuvan Zapata: Umama ka-Elfa Cely Banguero Duvan Zapata osanda kufika. Wazalelwa ePadilla, eColumbia futhi wakhulela eTetillo lapho ahlangana khona nobaba kaDuvan. Njengomyeni wakhe uLuis, u-Elfa waba nesandla ekukhuliseni indodana yakhe okuwukuphela kwayo. Eqinisweni, udunyiswa ngokuthatha uDuvan oneminyaka engu-11 ubudala ukuze azame ukungena ebusheni bekilabhu lendawo i-América de Cali. Ngokudabukisayo akazange aphile isikhathi eside ngokwanele ukuba ajabulele izithelo zomsebenzi wakhe njengoba wawa washona ngoJuni 2010. Yize ukufa kwakhe kwakuthintwe kakhulu nguDuvan, wazihlanganisa ngesikhathi esincane wenza isinqumo sokuhlonipha inkumbulo kamama wakhe ukuhlala ugxile ebholeni.
Hlangana nomama kaDuvan Zapata: Akafani nomunye: Inkumbulo ka-Elfa Cely Banguero iyohlala yaziswa njalo enhliziyweni yendodana yakhe uDuvan.
Mayelana nezingane zakubo kaDuvan Zapata: Uyazi ukuthi uDuvan akanamfowethu kodwa udadewabo ongumfowabo wakini omdala. Le ntokazi ekhonjwe njengoCindy Carolina ikhule noDuvan futhi ibilokhu isondelene naye kusukela esemncane kuze kube manje. Kuyajabulisa ukubona ukuthi bobabili babelana ngokulangazelela okufanayo kwebhola futhi bagcina imigqa yokuxhumana ivulekile kungakhathalekile ukuthi bahlukene ngamamayela.
Hlangana nodadewabo kaDuvan Zapata- uCindy Carolina. Bobabili bakhule ndawonye futhi basabelana ngesibopho esiseduze.
Mayelana nezihlobo zikaDuvan Zapata: Kude nempilo esheshayo kaDuvan Zapata, akukho okuningi okwaziwayo ngozalo lwakhe nangezimpande zomndeni wakhe njengoba kuhlobene nogogo nomkhulu kayise. Ngenxa yomunye wabazali bakaDuvan Zapata, uhlobene noCristian Zapata ongumzala wakhe. UCristian udlalela uhlangothi lukaSerie A uGenoa, akwaziwa kangako ngomalume bakhe nangomalumekazi wakhe ngenkathi abashana bakhe, abashana bakhe nabazala bakhe besazokhonjwa ngesikhathi sokubhala le biography.
Hlangana nomzala kaDuvan odumile uCristian Zapata.
UDuvan Zapata Biography-Amaqiniso okuphila komuntu siqu
Isimo sikaDuvan Zapata njengomgadli ovelele sigcwaliswa - futhi senziwa ngcono - ngobuntu obukhulu obuchazwa yizimpawu zesibonakaliso se-Aries Zodiac. Uthobekile, unomdlandla, uthanda ubumnandi, unamandla, unesifiso sokuvelela futhi uvulekele ukuveza amaqiniso ngamaqiniso akhe ayimfihlo nawomuntu siqu.
Njalo lapho umgadli engaziqeqeshi noma edlala ibhola, wenza imisebenzi embalwa esetshenziswe isikhathi esithe xaxa ethathwa njengezintshisekelo zakhe nezinto azithandayo. Kubandakanya ukuhamba, ukubhukuda, ukudlala imidlalo yevidiyo nokuchitha isikhathi esihle nomndeni wakhe nabangane.
Ukutadisha okuseduze kwe-speedometer enamandla kusikisela ukuhamba ngemikhumbi iDuvan ngeMini Cooper. Akumangalisi ukuthi umfana wayefuna isithombe ozishutha naye.
UDuvan Zapata Biography- Ama-Lifestyle Facts
Mayelana nokuthi uDuvan Zapata wenza kanjani futhi uyisebenzisa kanjani imali yakhe, unenani elilinganiselwa ku- $ 1M lemali ngesikhathi sokubhala. Ingxenye enkulu yengcebo yomgadli inemithombo esungulwe emiholweni nasemiholweni ayitholayo ngokudlala ibhola lezindiza ezisezingeni eliphezulu ngenkathi izincomo zifaka isandla esibucayi emnothweni wakhe okhulayo.
Kanjalo, umgadli uyakwazi ukuphila impilo yobukhazikhazi abalandeli bakhe nezitha abamonela yona. Ubufakazi bokuphila kahle kukaDuvan kufaka phakathi ikhono lakhe lokushayela izimoto zikanokusho kanye nokuhlala izindlu ezingabizi kakhulu namafulethi.
UDuvan Zapata Biography- Amaqiniso angenakubonwa
Ukugoqa indaba yethu yobuntwana kaDuvan Zapata kanye ne-biography lapha kunamaqiniso amancane awaziwa noma awafakazeki ngomshayi.
Iqiniso # 1: Ukwehlukaniswa Kwemholo: Njengesikhathi sokubhala, inkontileka yomgadli ne-Atlanta BC imbona ehola isamba semali engu- € 4,680,000 ngonyaka. Ukweqa umholo kaDuvan Zapata ube izinombolo ezijulile, sinokulandelayo;
ISONTO EKUGCINWELWENI KWAMAHHALA
NGONYAKA $ 5,122,377 € 4,680,000 £ 3,970,867
NGENYANGA $ 394,029 € 360,000 £ 305,405
NGESONTO LOKUQALA $ 98,490 € 90,000 £ 76,351
NGOSUKU $ 14,069 € 12,857 £ 10,908
NGEhora $ 586 € 536 £ 455
NGAMZUZU NGAMUNYE $ 9.76 € 8.9 £ 7.58
PER SecondOND $ 0.16 € 0.15 £ 0.13
Selokhu waqala ukubuka uDuvan ZapataI-Bio, yilokhu akutholile.
Uthi bewazi?… Kuzothatha isisebenzi esiphakathi nendawo eYurophu okungenani iminyaka eyi-18.5 ukuthola okufanayo I-Big Panther ihola ngenyanga eyi-1.
Iqiniso # 2: Inkolo: Ngokwemibiko, kungenzeka ukuthi abazali bakaDavan Zapata bamkhulisa ngokulandela inkolo yobuKhatholika. Wena, umgadli, hhayi omkhulu enkolweni kepha wake wabonwa esontweni lamaKatolika (bheka ngezansi). Lokhu kuthuthukiswa kufakazela ukuthi kungenzeka ukuthi uDuvan abe ngumKristu futhi abe ngumKatolika okholwayo.
Inkolo kaDuvan Zapata- Alikuphiki iqiniso lokuthi uyikholwa.
Iqiniso # 3: Iqiniso likaDuvan Zapata Tattoo: Like UDonyell Malen, USamuel Chukwueze, Luis Muriel futhi I-Krzysztof Piatek, UDuvan Zapata akanabo ubuciko bomzimba ngesikhathi sokubhala futhi abalandeli abanawo ama-tattoos akhe okwamanje. Ugxila kakhulu ekuthuthukiseni umzimba wakhe, amandla kanye nokuphakama kwezindawo eziphezulu nezisebenzayo zezindiza.
Ubufakazi besithombe bokuthi wayengenawo ama-tattoos ngesikhathi sokubhala.
Iqiniso # 4: Isilinganiso seFIFA seDuvan Zapata: Uyazi ukuthi uDuvan Zapata unesilinganiso seFIFA sisonke sangu-83 ngesikhathi sokubhala. Yize izilinganiso zakhe zibone ukukhuphuka kwezinkanyezi ezikhathini zamuva nje, akunakuphikwa ukuthi izilinganiso ezingama-87 zingathandeka kubathandi be-FIFA abafisa i-combo esondelene nekhono.
Izilinganiso zakhe zikhuphukile futhi zikhula ngokushesha.
Iqiniso # 5: Izilwane ezifuywayo zikaDuvan Zapata: Kukhona abagadli abaningi abanokuthile okufuywayo ikakhulukazi ezinjeni futhi uDuvan Zapata ungomunye wabo! Eqinisweni, inja yakhe ifana nokungezelela emndenini wakhe oseduze njengoba kubonakala ngendlela ayithola ifakwe ezithombeni zomndeni.
Ngabe uyazithanda izilwane ezifuywayo ezinjengoDuvan Zapata nomndeni wakhe?
Iqiniso # 6: Iqiniso likaDuvan Zapata Ukubhema Nokuphuza: UDuvan Zapata akanikezwanga ukuphuza iziphuzo ezinzima, futhi akakaze abonwe ebhema ngesikhathi sokubhala. Ngomkhuba onjalo ophilile, uDuvan ujoyina iligi yabadlali bebhola abangazange bakhohlwe isidingo sokuphila nokuhlala bephilile.
UDuvan Zapata Biography- Isizinda Solwazi se-Wiki
Kulesi sigaba sokugcina seDuvan Zapata Biography Facts, uzobona isisekelo sethu solwazi lweWiki. Kuboniswe ngezansi, kukusiza ukuthi uthole imininingwane ngomgadli ngendlela emfushane nelula.
Igama likaDuvan Zapata eligcwele UDuván Esteban Zapata Banguero
Usuku lokuzalwa lukaDuvan Zapata 1 ka-Ephreli 1991
UDuvan Zapata's Age 28 (Kusukela ngoFebhuwari 2020)
Igama likababa kaDuvan Zapata ULuis Oliver Zapata
Igama likamama kaDuvan Zapata U-Elfa Cely Banguero (Mhlambe)
Ukuphakama kukaDuvan Zapata I-1.89 m (6 ft 2 in)
Indawo yokuzalwa kaDuvan Zapata IPadilla, eCauca, neColombia
UDadewethu kaDuvan Zapata UCindy Carolina
Umzala kaDuvan Zapata UCristian Zapata
Inkolo kaDuvan Zapata UbuKhrestu (ubuKatolika)
Umfazi kaDuvan Zapata UNana Montano
Izingane ZikaDuvan Zapata UDantzel (indodakazi yakhe) noDayton (indodana yakhe).
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda izindaba zethu zeDuvan Zapata Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Facts. At LifeBogger, silwela ukunemba nokungakhethi. Uma uthola okuthile okungabonakali kahle, sicela wabelane ngakho nathi ngokuphawula ngezansi. Siyohlala siyazisa futhi siyihlonipha imibono yakho.
I-Atalanta BC Soccer Diary
Ama-Amad Diallo Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-Alessandro Bastoni Ingane Yendaba Yobuntwana I-Untold Biography Amaqiniso
Amaqiniso kaLuis Muriel Ingane Yobuntwana Ne-Untold Biography Amaqiniso
BHALISELA KU-LIFEBOGGER FOOTBALL STORIES!
Ngiyavumelana nenqubomgomo yemfihlo kanye nemigomo. (isixhumanisi)
Usuku olushintshiwe: Okthoba 10, 2020
Usuku olushintshiwe: Okthoba 18, 2020
Ama-Eduardo Camavinga Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Usuku olushintshiwe: Disemba 2, 2020
I-Virgil van Dijk Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts
Usuku olushintshiwe: Okthoba 19, 2020
URobert Lewandowski Ubuntwana Bombhalo Plus Untold Biography Facts
USergio Aguero Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts
Nesitatimende !! ILifeBogger ayifuni ubunikazi bezithombe ezifakwe kule webhusayithi. Futhi, asizibambeli thina izithombe noma amavidiyo. Ababhali bethu baxhumanisa nje nomnikazi ofanele. Okokugcina, iLifeBogger ikucubungulisise futhi yakubuyekeza konke okuqukethwe kwayo. Ngaphandle kwalokho, kungenzeka ukuthi eminye imininingwane ingahle iphelelwe yisikhathi noma ingaphelele.
Xhumana nathi: admin@lifebogger.com
Usuku olushintshiwe: Novemba 4, 2020
Usuku olushintshiwe: Disemba 23, 2020
Usuku olushintshiwe: Januwari 10, 2021
Usuku olushintshiwe: Okthoba 11, 2020
Usuku olushintshiwe: Okthoba 6, 2020
Usuku olushintshiwe: Novemba 25, 2020